ဖွင့်ခြင်းနှင့်နှိပ်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ရန်အီးမေးလ် Optimization သိကောင်းစရာများ | Martech Zone
ContentLEAD မှဤအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်သည် ပို၍ လွယ်ကူသည်မဟုတ်ပါ။ ခဲတစ်ခဲလျှင်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းတို့ကြောင့်အလားအလာရှိသောအီးမေးလ်များကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကြီးမားသောပြproblemနာကိုဖြစ်စေသည်။ ရာပေါင်းများစွာသောထောင်ပေါင်းများစွာသောအခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ဆေ့ခ်ျများအကြားသင်၏အီးမေးသည် inbox ထဲတွင်ပျောက်ဆုံးနေသည်။
သင်၏အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုကိုလူအုပ်စုနှင့်ခွဲခြားရန်သင်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ ဤတွင်အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခု၏ခန္ဓာဗေဒအတွင်းရှိအချက် ၅ ချက်ပါရှိသည်။
တိကျသောဘာသာရပ်လိုင်းများ ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ် ပွင့်လင်းမှုနှုန်း 20% ပိုမိုမြင့်မား ပျမ်းမျှအားဖြင့်
ကိုယ်ပိုင်နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ် 129% ပိုမိုမြင့်မားကလစ် - မှတဆင့်နှုန်းထားများ.
ကော်ပိုရေးရှင်းမဟုတ်သောစကားပြောပါ ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ် ၂၄% ပို၍ နှိပ်နိုင်သည်.
ပုံများထည့်ပါ ဘို့ 82% အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်.
Segmented မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ပရိသတ်များက ဦး ဆောင်လမ်းပြ ၂၄% ပို၍ နှိပ်နိုင်သည်.
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်အလွန်ထိရောက်သောကြောင့်အမှတ်တံဆိပ်တိုင်းက၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုသည်။ အလားအလာရှိသော inboxes များသည်ကုမ္ပဏီများမှအီးမေးလ်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီးသင်၏ဖောက်သည်များသည် spam မှတန်ဖိုးရှိသောစာများကိုခွဲထုတ်ရသည်။ ဒီအချက်အလက်တွေကအောင်မြင်တဲ့အီးမေးလ်တစ်ခုရဲ့ခန္ဓာဗေဒကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးပရိသတ်ကိုဝေမျှနိုင်တဲ့အရာတွေထဲမှာအအောင်မြင်ဆုံးအလေ့အကျင့်တွေကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ မင်္ဂလာပါ
Tags: ကော်ပိုရိတ်စကားပြောနှုန်းကနေတဆင့်အီးမေးလ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှုန်းကိုအီးမေးလ်ကလစ် - thruအီးမေးလ်ကလစ်နှိပ်ပါအီးမေးလ်ပုံရိပ်တွေအီးမေးလ်ဖွင့်နှုန်းအီးမေးလ်ဖွင့်လှစ်အီးမေးလ်ပိုကောင်းအောင်အီးမေးလ်အပိုင်းအီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်းများစကားပြောကိုယ်ပိုင်နှုတ်ခွန်းဆက်သည်